Maxay yihiin rabshadaha ka socda Turkiga?
Home WARARKA Maxay yihiin rabshadaha ka socda Turkiga?
Turkey-(Berberanews)-Dibadbaxyada ayaa ka qarxay dalka Turkiga ka dib markii madaxweyne Erdogan uu go’aansaday inuu ka baxo heshiiska caalamiga ah ee taariikhiga ah kaasoo ujeedkiisu yahay in haweenka laga ilaaliyo xadgudubyada.
Madaxweyne Recep Tayyip Erdogan ayaa kiciyay dibadbaxyada dalka oo dhan ka bixitaanka Turkiga ee heshiiska caalamiga ah si looga hortago rabshadaha ka dhanka ah haweenka.
Go’aankan ayaa yimid iyadoo ay sii kordhayaan baaqyada loo jeedinayo Turkiga ee ku aadan la dagaalanka rabshadaha ka dhaca gudaha iyadoo ay sare u kacayaan heerka dilalka dumarka.
Saraakiisha Turkiga waxay ku doodayaan in qawaaniinta qaranku ku filan yihiin si loo hubiyo ka hortagga rabshadaha jinsiga.
“Dammaanadda xuquuqda haweenka ayaa ah xeerarka hadda ka jira xeerarkeenna, ugu horrayn Dastuurkeenna.
Nidaamkeenna garsoor waa mid firfircoon oo xoog leh oo ku filan in lagu hirgeliyo xeerar cusub sida loogu baahan yahay,” Wasiirka Qoyska, Shaqada iyo Siyaasadaha Bulshada Zehra Zumrut Selcuk ayaa ku tidhi barta Twitter-ka.
Sidee ayey kooxaha xuquuqda haweenka maanta uga jawaabayaan?
Dadka u ololeeya xuquuqda haweenka ayaa si naxdin leh uga falceliyay waxayna ku baaqeen in waddooyinka la maro. Elif Shafak oo ah qoraa caan ah oo reer Turki ah ayaa bartiisa Twitter-ka ku soo qoray “Waxaan aad iyo aad uga naxay inaan ogaado in caawa ay dowlada Turkiga si rasmi ah u shaacisay inay ka baxayaan heshiiskii Istanbul.
Kani waa wadan seddex haween ah lagu dilo maalin kasta isla markaana dil dumarku ay tahay dhibaato aad u weyn, ”qoraaga caanka ah ee reer Turkiga Elif Shafak ayaa ku qoray Twitter
RECEP DAYIB ERDOGON
Previous articleSomaliland oo biyo xidheenno ka dhisaysa Hargeysa iyo Saaxil
Next articleMidowga Yurub oo hanjabaad culus u diray Madaxda Somalia